Emptiness: September 2009
ငါတို့နေရာ ဤမြေကမ္ဘာ .....
ကိုယ့်တို့ ရွာအကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုယင် တောတွေပြုန်းတီးပြီး ရွာသားတွေ စိုက်တဲ့ သီးနှံတွေက တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အပူရှိမြင့်တက်လာလို့ သဘာဝအတိုင်း ဓာတ်မြေသြဇာမပါဘဲ အသီးအထွက်လျော့လာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ လောလောဆယ် ကုလသမဂ္ဂမှာလည်း တောပြုန်တီးတာနဲ့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု ဆိုတဲ့ ကောင်းစဉ်တွေနဲ့ပဲ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဆွေးနွေးမှုလုပ်လာတာတွေ့နေရတယ်။သူတို့ကတော့ ရောင်စုံမီးတွေအောက်မှာ ခန်းနားကြီးကျယ်စွာနဲ့ဆွေးနွေကြနေကြတာပေါ့။ တို့ကတော့ ရွာမှာ ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ပဲ လူတွေစုံတုန်း တောင်ယာခုတ်လို့ တောပြုန်းတီးလာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို တစ်ခါတုန်းက ကြုံလို့ ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရွာသူရွာသားတွေက ဘာတွေလာပြောနေပါလိမ့်လို့တစ်ချို့က တွေးတောစရာ ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်။ ရွာလယ်မှာ တောင်ကျချောင်းရေကတော့ ငယ်ငယ်ကဆို တပေါင်း တံခူးလထိ ရေတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ပြာသိုလ၊ တစ်ပိုးတွဲလလောက်ဆိုပဲ ကျွဲ၊နွားနဲ့ လူတွေက ရွာလယ် တောင်ပေါ်ကနေစီးလာတဲ့ ချောင်းရေကို လုယက် သုံးနေရသလိုဖြစ်လာနေကြပြီ၊ တောင်ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ကျေးလက်ချစ်ဖွယ်ရွာလေးမှာတော့ ရွာသားတွေက ရာဘာပင်တွေ၊ လိမ်မော်ပင်တွေ ၊ မင်းဂွတ်သီးပင်တွေ၊ သံပရာပင်တွေစိုက်တာနဲ့တင် မြေနေရာမလုံလောက်လာလေတော့ စိုက်စရာမရှိမြေမလောက်တော့ တောင်ပေါ်တက်ပြီး တောင်ယာခုတ်ယင်း ခြံခင်းတွေ ချဲ့ထွင်လာကြတယ်။ သဘာဝသစ်တောကပေးနိုင်တဲ့ ရေ၊ လေ၊ သဘာဝမြေ သြဇာ တွေကလိုသလောက်မရကြတော့ပေ။ အစရှာတော့ ရွာလယ်မှာ စိုက်တဲ့ အသီး အရွက် စားပင်သောက်ပင် ကြီးငယ်များလဲ သဘာဝမြေဆီလွှာခန်းခြောက်လာတော့ သဘာဝမဟုတ်တဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဓာတ်မြေ သြဇာတွေ အားကိုးလာကြရတယ်။
ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကလဲ ဒါကိုသိပ်မသိတော့ အထူးအထွေမပြောလို၊ ပြောဖို့တာဝန်ပေးတဲ့သူကိုတော့ နည်းနည်းတော့ အချဉ်ဖတ်သမားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က ကိုယ်ထိုင်နေတဲ့ သစ်ကိုင်းကိုပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖြတ်နေလေတော့ လမ်းဘေးလူက အမြင်မတော်လို့သတိပေးခဲ့ယင်တောင်မှ ကဲ့ရဲ့တဲ့ မျက်လုံးနဲ့ လှမ်းကြည့်ခံကြရသေးတယ်။
ဒါနဲ့ ရွာလည်မှာလမ်းဖြတ်လျှောက်တော့ တောင်သူတစ်ယောက်က မေးလာတယ်။ ရှေးအစဉ်ဆက် သူတို့ဘိုးဖွားဘီဘင်ကတည်းက ဒီလိုပဲ ရိုးရာ အစဉ်လာ လုပ်စားလာတာ အခုနေခါမှ မျိုးစုံနေတော့တာပဲတဲ့။ ကမ္ဘာပျက်ခါနီး နေမင်းကြီး ခုနစ်စင်းထွက်ယင် ကမ္ဘာလောင်မယ်မဟုတ်လား၊ အဲဒီအစား အခုတောခုတ်လဲ ဘာထူးလာမလဲတဲ့။ သူလဲ ကျနော် ခပ်ငယ်ငယ်က အတွေးလိုပဲထင်ပါတယ်။ ခန့်ငယ်ငယ်ကတော့ ကိုယ့်ရွာသည်သာ ကိုယ့်ကမ္ဘာထင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါလားနော်။ ငါကတော့ မြို့မှာ ကာဘွန်ထုတ်နေတဲ့ အဲယာကွန်းကားစီးလို့ကောင်းနေပေမယ့် ရွာမှာတော့ဖြင့်............... ဟင်း ....ဘယ်လိုပက်သက်နေတာဘာလိမ့်နော်။
ဤစာပိုဒ်ကလေးဖြင့် ကုသမဂ္ဂက ပိဘတ်စ်မြို့တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသော ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။
Posted by ကျော်သုည at 7:32 AM No comments:
ပါတ်စပို့စ် လုပ်လိုသူများ စုံစမ်းရန်
It isagood news for myanmar migrants workers all over the Kingdom of Thailand.
Migrants workers can apply new border pass book instead of current work pass / permit hold.
Thai Government could announce about procession of visa issue at the end of 2009. They will have an good opportunity to travel around country to work without any limitation as before.
လက်ရှိ သံတောင့်ဘတ်ကိုင်ထားသူများ၏ သံဒေါင့်ဘတ်ကို လာမည့် ၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်
သက်တမ်းကာလ (၂) နှစ် ရှိ မြန်မာပါတ်စပိုစ်စာအုပ်များနှင့်လဲလှယ် ထုပ်ပေးမည်ဟုဆိုသည်။
ပါတ်စပိုစ်ခ ကျပ်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်
ထိုင်းဗီဇာကြေး ---------------------- ထိုင်းဘတ်ငွေ ၂၀၀၀ ဘတ် ကုန်ကျမည်တဲ့။
၁။ မြ၀တီ + မဲဆောက် ဌာန
၂။ကော့သောင်း + ရနောင်း ဌာန
၃။တာချီလိတ် + မယ်ဆိုင်ဌာန
ဘန်ကောက် ဖုန်းနံပါတ်= ၀၈၄-၆၄၅-၆၆၃၃
မဲဆောက် ဖုံးနံပါတ် = ၀၈၅ -၃၉၄-၀၃၈၁ / 084035307210
အသေးစိတ် သိလိုလျှင် အထက်ပါ ဖုံးနံပါတ်ကို ဆက်သွယ် စုံစမ်း ကြပါရန်။
ခေတ်ပြိုင်သတင်း နှစ်ပုဒ်က တော့... ဒီမှာလဲ ဖတ်ပါအုံး
Posted by ကျော်သုည at 2:10 AM No comments: